Fitrandrahana - Newsway Valve Co., Ltd.
Ny fitrandrahana dia manondro ny fitrandrahana harena an-kibon'ny tany voajanahary toy ny solida (toy ny arina sy ny mineraly), ny ranoka (toy ny menaka manitra) na ny entona (toy ny entona voajanahary). Anisan'izany ny fitrandrahana ambanin'ny tany na any ambony, ny fitrandrahana ny toeram-pitrandrahana, ary ny asa fanampiana rehetra, toy ny fikolokoloana, ny tombotsoana ary ny fitsaboana, izay matetika atao eo akaikin'ny toerana misy ny toeram-pitrandrahana na tranokala hanodinana akora, dia asan'io karazana io.
Ny NEWVAY VALVE dia manome vahaolana ho an'ny indostrian'ny harena ankibon'ny tany dia hanampy amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny tontolo iainana, ny toe-javatra iasan'ny fantsom-pamokarana, ny fotodrafitrasa ary ny fiainana amin'ny valizy, ary hampihena ny fihenan'ny fotoana vokatry ny fikojakojana.
NEWSWAY VALVE dia afaka manome ny indostrian'ny metaly sy ny mineraly amin'ny valizy baolina mafy mipetraka amin'ny vy izay mahazaka ny tontolon'ny fikirakirana fatratra. Ny valves autoclave antsika dia nahomby tanteraka tamin'ny fampiharana pipeline slurry manerana ny tany.
Tsenan'ny fampiharana voalohany:
Fitrandrahana vy sy fanamorana
Fitrandrahana sy fanodinana mine mine aluminium
Fitrandrahana sy fanodinana harena ankibon'ny Nickel mine
Fitrandrahana sy fanodinana harena ankibon'ny tany
Vokatra tafiditra indrindra:
Valve vy vita amin'ny vy mahazatra